Warbixin-Maxaa hooyooyinka Afrikaanka ah u badiyay halista dhimashada xiliga uurka iyo dhalmada? | Baahin Media
Warbixin-Maxaa hooyooyinka Afrikaanka ah u badiyay halista dhimashada xiliga uurka iyo dhalmada?
Haweenka madow ee ku nool dalka UK ayaa ah kuwa ay soo wajahdo qatarta ugu badan ee dhimashada hooyada xaaladaha caafimaad darro ee ku xeeran xiliga xaamilka iyo dhalmada awgood markii loo barbardhigo haweenka cadaanka ah.
Balse inta badan, warbixinta xaaladaha dhimashada hooyada iyo tirada rasmiga ah ee keliya la xaqiijiyay ayaa wax horey loo ogaa oo ahayd in hooyada madaw ee xaamilka ah ay wajahdo halis badan.
Sababaha dhimashada hooyada xiliga uurka iyo geerida ku timaada dhallaanka yayar ayaa ah mid naadir ah.
Balse sida lagu sheegay hal warbixin, waxaa jiro suuragalnimo ah in haweenka madow ay wajahayaan qatar badan markii loo eego kuwa cadaanka ah.
Fursada dhimashada ayaa ah hal 2,500-kii haween ee madow ah sida ay sheegtay waaxda baaritaanka qarsoodiga ah ee dhimashada hooyooyinka.
Balse heerkan ayaa shan jeer ka yar heerka dhimashada haweenka cadaanka ee sanadihii 2014 iyo 2016.
Laakiin maxay sidani u dhaceysaa?
Williams and Beyoncé have both talked about the trauma of childbirth
Haweenka madow ee magaca leh sida Serena Williams iyo Beyoncé ayaa ka hadlay dhibaatooyinka heysta haweenka madowga ah iyo sababta ay u dhintaan xiliyada uurka iyo dhalmada.
Fanaanada Beyoncé ayaa wax ka qortay xanuun ku dhacay xiligii ay uurka lahayd kaasi oo haweenka madowga ah ay halis badan ugu jiraan inuu haleelo, halka xidigta teeniska Serena Williams ay sheegtay inay nasiib badan tahay maadaama ay ka badbaaday xaalado caafimaad darro oo soo wajahay xiligii ay dhaleysay gabadheeda.
Williams ayaa sheegtay inay farxad dareentay “maadaama fursad ay u heshay in koox dhaqaatiir iyo kalkaalisooyin ah oo ka howlgalayay isbitaalka dowladda ay la kulantay oo ay daaweeyeen ” balse haweenka madow ee ku nool UK aysan caadiyan fursadahaas helin.
Xaqiiqatan, Mareykanka heerka haweenka uurka leh ee lala xiriiriyo dhimashada waxaa ka mid ah haweenka madow waxayna saddex ilaa afar jeer ka badan yihiin haweenka cadaanka ah.
Xaalado la xiriira nolosha qoysaska ayaa laga yaabaa inay sabab u tahay tirada qaarkeed, hal warbixin ayaa lagu ogaaday in dumarka madow ee dabaqada dhexe ay ku badneed dhimashada xiliga umusha si ka duwan haweenka cadaanka ah ee dabaqada sare ah.
Warbixinta ayaa sheegeysa in tiradan ay qeyb ahaan sharaxaad ka bixineyso xaaladaha caafimaad darro ee soo wajaho haweenka madow.
Axmed dal nabad ah ayaa laga soo tarxiilay balse waa la dilay
Qof goob jooge ah: Waxaan ku duceystay inay rasaastu ka dhamaato
Tirada dhimashada qaraxyadii Muqdisho oo korodhay
Balse warbixinta ayaa sidoo kale tilmaantay arrimo kale oo ay ka mid yihiin in haweeenka madow aysan raadsanin daryeel caafimaad ka hor xiliga dhalmada.
Dr Ria Clarke, oo haatan ku dhaw inay noqoto dhaqtar dhalmada daweysana cudurada haweenka ayaa sheegtay bishii Janaayo in haweenka madow iyo kuwa Aasiya kasoo jeedo ay u badan tahay in caafimaadkooda ay saameysay dhibaatooyinka dhaqaale ee ay wajahayaan.
“Waan ognahay inay jiraan sababo caafimaad,” ayay intaasi raacisay.
“Waxaan kale oo ognahay in haweeneydu haddii ay ku nooshahay xaalad nololeed oo liidato, ama ay ku tiirsan tahay qoys sabool ah, in arrimahaas dhan ay saameyn ku yeelanayaan caafimaadka haweeneyda, marka waala arki karaa sida saameynta ay ku yeelaneyso heerka dhimashada hooyada.”
Balse waxay sheegtay in sababtu aysan intaas keliya ku koobneyn.
“Waxaan u baahannahay inaa ka hadalno arrinta la xiriirta in dumarka madow aysan dareemeynin in si wanaagsan aan loola mucaamilin xiliyada ay tagaan isbitaalada, taasi oo laga yaabo inay sabab u tahay inaysan sheegin dhibaatooyinka heysta.
“Tani waa in degdeg wax looga qabtaa sababtoo ah haweenku way dhimanayaan hadii aysan lahayn midab gaar ah waxaan u baahannahay inaa ogaano sababta.”
Candice Brathwaite waxay rumeysan tahay inay la kulantay cunsuriyad xiligii ay umuleysay gabadheeda.
Waxay sheegtay in loola dhaqmay si ka duwan sida hooyooyinka kale ee ay isku xaalada ahaayeen maadaama ay ka midab duwaneyd, waxayna sheegtay in haweenka kale ee cadaanka ah si wanaagsan loo dhageysanayay loona dhimrinayay” arrintaasi oo ay sheegtay in iyada aanan loo sameynin.
Markii ay haweeneydan u sheegtay shaqaalaha inay dareentay “xanuun darran” kadib qaliinkii lagu sameeyay, ayay dareentay in aana la tixgalin xaaladeeda, taasi oo ay ku sheegtay inay ahayd cunsuriyeyn midabkeeda ah.
Sababaha dhaliya in haweenka madow ee ku nool UK ay ugu badan yihiin halista dhimashada
Sababaha ka dambeeyo kororka heerka dhimashada hooyooyinka xiliga dhalmada ayaa waxaa baaritaan ku sameeyay hay’adda qaran ee caafimaadka UK.
Hya’adda caafimaad ee NHS ee UK ayaa sheegtay in dumarku ay tahay in haatan laga bilaabo inay arkaan mid ama labo umuliso ilaa iyo inta ay ka qaadanayaan adeegyada caafimaad.
“Halka lagu gaaro sanadka 2024, boqolkiiba 75% haweenka madow, kuwa Aasiya kasoo jeedo iyo qowmiyadaha kale ayaa ka heli doono daryeel caafimaad oo joogto ah umulisooyinkooda xiliga uurka, foosha.
“Dhimasho kasta waxay ka mid tahay dhibaatooyinka badan ee soo wajaha qoyska, qoyska hooyadu ka geeriyootana muraaj-jab ayaa ku dhaca. Ayuu yiri Prof Lesley Regan